Silhouettes leh qorax-dhaca qorrax-dhaca kaararka ka soo baxa Qorrax-dhaca Selfies | Abuurista khadka tooska ah
Sunset Selfies waxay noo geynaysaa shaqo farshaxanimo oo karti leh taas oo aan ku leenahay shaashado kartoon ah oo sawiraya xayawaanka iyo dadka caanka ah si ay u abuuraan muuqaallo hal abuur leh.
Waa shaqada hal-abuur hal abuurnimo ah oo loo maro Nooca Sunset Selfies ayaa la soo saaray. Oo siduu isagu isagu yidhi, maalin kasta wuxuu u baahan yahay inuu ka tago shaqada laptopkiisa si uu wax ugu abuuro gacmihiisa. Runtuna waxay tahay inay si fiican ugu qalanto sida ku cad sawirrada qaar ee aan hoos ku wadaagno.
Nidaamkiisa hal-abuurnimo maahan inay tahay wax guriga lagu qoro. Sida uu faallo ka bixinayo, qaado kartoon weyn, wuxuu sawiraa sawir, wuxuu ku jarjaraa mindi iyo maqas, wuxuuna u qaataa inuu la aado isaga si uu u qaato sawirro iswada markii qorraxdu dhacdo.
Waa adeegsiga hooska iyo kuwa mugdiga ah leh silhouettes-ka oo sawiraya kartoonada halka ay ku taal Sunset Selfies waxaa loo waxyooday inuu abuuro daqiiqado wax ku ool ah oo na dhiirrigeliya isla waqtigaas.
Sidee u qaadataa kan isku mid ET the Extraterrestrial sidaa darteed suulka isku mid ah waxay abuuri kartaa barta iftiinka oo markaa ka tagta asalka qorrax dhaca ee soo bandhigaya saameyn muuqaal ah oo siiya wax badan oo xaqiiqda ah goobta.
Sidoo kale waxaan leenahay Rafaa birta ah taas oo uu cagihiisa ku tiirsanayo si uu u abuuro muuqaal kale oo leh saamayn muuqaal ah oo aan cidna dan ka lahayn.
Ama sida libaax badeedkaaga ku jira silhouette waxay umuuqataa inay cunno kaheleyso isla Farshaxanka Sunset Selfies qaadasho kale oo xiiso leh iyo hal-abuur leh. Waad raaci kartaa shaqadooda boggaaga Instagram oo markaa ku soo biir kuwa badan ee la yaabay farshaxankiisa iyo sida uu ugu isticmaalo qorrax dhaca qorraxda si uu u abuuro sawirradan.
Ha moogaanin kuwan 37 silhouettes oo dadku isticmaalaan shaqooyinkaaga hal-abuurka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawir » Shaqo hal abuur leh leh kartoon loogu talagalay qoraxda 'Selfset silhouettes'